Adda Bilisummaa Oromoo: Sanbata darbe yaalii ajjeechaatu raawwatame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAdda Bilisummaa Oromoo: Sanbata darbe yaalii ajjeechaatu raawwatame
Taateen Sanbata darbe raawwatame yaalii ajjeechaa hooggansaafi gorsitoota olaanoo dhaabbichaa irratti raawwatame ta’uu ABO’n ibsa har’a kenneen beeksiseera.
(bbcafaanoromoo)–“Humna waraanaa hidhateen weerara hin barbaachisnetu taasifame,” kan jedhan miseensi koree hoji raawwachiistuu ABO Obbo Mikaa’el Booran, gochaan raawwatame tartiiba seeraa kan eeggate akka hin turre himan.
Qe’een hooggansiifi gorsitootni olaanoo ABO keessa jiraatan humnootii mootummaa lakkoofsaan 25 ta’aniin weeraramuu isaa kan himan Obbo Mikaa’el, “uuffatni humnootin kunneen uffatan uuffata miseensota poolisii magaala Finfinnee ta’ulleen miseensootni poolisii Federaalaafi poolisii Oromiyaa akka turan booda hubanneerra,” jedhan.
“Eessaa akka dhufaniifi ajaja mana murtii akka qaban gaafachuullee hin dandeenye. Rasaasnis dhukaafamaa ture,” jechuun ibsicharratti kan himan Obbo Mikaa’el garaadhaan akka ciisan taasifamuufi cancalaan hidhamuu himan.
“Sana boodas iddoo lamatti qoodamuun gara buufataalee poolisii lamatti geeffamne,” jedhan.
‘Poolisiin achi-buutee Obbo Abdii Raggaasaa himuu qaba’ – Amnastii Intarnaashinal
‘Gamtaa’ paartileen Oromoo sadan ijaarrachuutti jiran maaltu mudate?
Humnootiin nageenyaa sakkatta’iinsa mana keessaa taasisuunis kompitarootni, mobaayilootni, maallaqni, kuusaaleen odeeffannoo, waraqaan eenyummaafi paasportiin isaanii fudhatamuu kan himan immoo gorsaa olaanaa ABO kan ta’an Dr. Shuggux Galataati.
Meeshaaleen jalaa fudhataman akka hin deebisamneefis dubbataniiru.
Dhimma Obbo Abdii Raggaasaa ilaalchisee hanga ammaatti eessa buutee isaanii akka hin beekneefi maaliif kophaatti akka hambifamanis quba akka hin qabne dhaabbatichi beeksiseera.
Wanti guyyaa sanbata xiqqaa raawwatame uummatni bakka buutota isaa nagahaan akka hin filanneefi kan raawwatame ta’uufi Obbo Abdii Raggaasaanis dhimmuma kanaaf yoo ta’e malee yakka biraa akka hin raawwanne ibsa har’aa irratti himameera.
Rakkoon guyyaa Sanbata muddate itti fufiinsuma rakkoo kana dura mul’achaa turee ta’uusaa kan himan hooggansi fi gorsitootni ABO ibsa har’aa laatan, kaayyoon isaas “ABO laamshessuu fi filannoo 2012 irratti akka hin hirmaanne gochuudha jedhan.”
Kanaan duras aanaa Boosatiifi magaala Baakkotti sagantaa ABO irratti dhukaasni dhukaafamuu fi kan aanaa Boosat irratti yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu Obbo Kennasaa Ayyaanaa himaniiru.
Hooggansi dhaabbichaa magaaloota garaagaraa akka hin seenne dhorkamuu fi karaarraa akka deebi’an godhamuus dubbatan.
“Mootummaan humna qabuun namoota ilaalcha isaan adda ta’e qaban doorsisaa jira,” kan jedhan miseensi koree hoji raawwachiistuu ABO Obbo Mikaa’el Booran “mootummaan ibidda dhaamsuun hin danda’amne qabsiisaa jira,” jechuun dubbatan.
ABO’n maaliif marii Gaaddisa Hoggansa Paartilee Oromoo irraa hafe?
Haala kanaanis dhaabbileen siyaasaa nagahaan socho’anii mootummaan uummata ijaaruu akka hin dandeenyeefi kunis yaaddoo itti ta’uu himan.
Rakkinichi yeroodhaa gara yerootti hammaachaa akka jiru kan himan hooggansi ABO mootummaan waan kanarraa hatattamaan akka dhaabbatu fi filannoon haqaa akka adeemsifamuf haala akka mijeessuu waamicha dhiyeessan.
Uummatni fi dhaabbileen siyaasaas gahee isaanii akka bahatan gaafataniiru.
Duulli “Anis Jaal Abdii Ragaasaadha,” Jaal Abdii Raggaasaa atattamaan Hiikkamuu qaba jedhu guutummaa Oromiyaafi Lafa Oromoon jiru cufatti itti fufuu qaba!